Semi-Blackout ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - China Semi-Blackout စက်ရုံ
စျေးပေါစျေး Zebra Plain အရောင်နှင့်အထည်မျက်စိကန်း
Zebra blinds ထည်ကိုသက်တန့်မျက်စိကန်းသောထည်၊ သက်တန့်မျက်စိကန်းထည်၊ မှိန်သော roller blinds ထည်နှင့်နှစ်ထပ်အလွှာ roller blinds ထည်သို့မဟုတ် dual-roller blinds ထည်ဟုလည်းလူသိများသည်။ ၎င်းသည်အထည်အမျိုးအစားနှင့်အထည်များ၏အားသာချက်များကိုပေါင်းစပ်ရုံသာမကဘဲ venetian blinds, roller blinds နှင့်ရောမ blinds များ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပါပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းကိုအိမ်များ၊ ဟိုတယ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဗီလာများ၊ နေရာများ။
စျေးကွက်ရှိ zebra blinds ထည်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Groupeve zebra blinds ထည်၏အသွင်သဏ္muchာန်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသည် ပို၍ ရိုးရှင်းပါသည်။
ရုံး ၀ င်းဒိုးမျက်နှာပြင်အတွက် China Decor Privacy Zebra မျက်မမြင်ထည်
သက်တန့်မျက်လုံးများ၊ မှေးမှိန်သောမျက်မမြင်များ၊ နှစ်လွှာအလွှာရှိ roller blinds, နေ့နှင့်ညဘက်မျက်မမြင်များစသည့်လူသိများသည့် Zebra blinds များကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှစတင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာတွင်လည်းလူကြိုက်များသည်။ zebra window roller blinds ထည်၏အကျယ်မှာ ၃ မီတာဖြစ်ပြီး၊ ပစ္စည်းမှာ ၁၀၀% polyester ဖြစ်သည်။
3. ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်း / ပိုးသတ်ခြင်းကာလအတွင်းကုလားကာများကိုသုတ်ရန်နူးညံ့သောရေနှင့်စိုစွတ်သောနူးညံ့သောအထည်သို့မဟုတ်ရေမြှုပ်ကိုသုံးပါ။ လိုအပ်ပါကပျော့ဆေးရည်ထည့်နိုင်သည်။ အ ၀ တ်အထည်များပျက်စီးခြင်းမှပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်ညင်ညင်သာသာသုတ်ပါ။ ရှင်းလင်းခြင်းဖြင့်ကုလားကာသန့်ရှင်းစေနိုင်သည်။
4. ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်း / ပိုးသတ်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည့်အထည်ကုလားကာမှ ၁၀ စင်တီမီတာအကွာအဝေးတွင်လေမှုတ်ရန်ရေနွေးငွေ့သံဖြင့်သုံးပါ။
အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းနှင့်အတူတရုတ်စက်ရုံထောက်ပံ့ရေး Zebra မျက်မမြင်အထည်
Zebra blinds ထည်ကိုသက်သက်သာမျက်စိကန်းသောထည်၊ သက်တန့်မျက်စိကန်းထည်၊ မှေးမှိန်သော roller blinds ထည်နှင့်နှစ်လွှာအလွှာ roller blinds ထည်သို့မဟုတ် dualer roller blinds ထည်အဖြစ်လူသိများသည်။ ၎င်းသည်တူညီသောအကျယ်ရှိသည့်သေးငယ်သည့်အ ၀ တ်အထည်နှင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားကွဲလွဲနေသောကွက်လပ်တစ်ခုမှယက်လုပ်သည့်ထည်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။
စျေးကွက်ရှိ zebra blinds ထည်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကညှိနှိုင်း။ ရသောအလင်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောအလင်းအခြေအနေများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သော Groupeve Zebra Blinds Fabric ၏အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ရုပ်သွင်သည်ကောင်းမွန်သည်။
နေအိမ်နှင့်နေ့နှစ်ညသက်ညှာ Shades အထည်
zebra blinds, dimming blinds, double-layer roller blinds, day and night blinds, rainbow blinds စသဖြင့်လူသိများသောသက်သက်ရိပ်သာလမ်းများသည်တောင်ကိုရီးယားမှစတင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာတွင်လည်းလူကြိုက်များသည်။ ၎င်းကိုအိမ်များ၊ ဟိုတယ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဗီလာများ၊ အဆင့်မြင့်ရုံးအဆောက်အအုံများနှင့်အခြားနေရာများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။
ဥရောပစတိုင် Rainbow မျက်မမြင်ထည် 100% Polyester
Zebra blinds, dimming blinds, double-layer roller blinds, day and night blinds စသည်ဖြင့်လူသိများသော Rainbow blinds ကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှစတင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာတွင်လည်းလူကြိုက်များသည်။
ငါတို့ရှိသမျှသိသည်အတိုင်း, သက်တံ့မျက်စိကန်းထည်၏အရိပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအဓိကအားပစ္စည်းအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ ထည်၏ဝိသေသလက္ခဏာများအရ၎င်းကို Semi-blackout သက်တန့်ရောင်ခြည်သက်တန့်နှင့်မီးတောက်မှိန်သက်တန့်အရောင်ခွဲခြားနိုင်သည်။
shading effect ရွေးချယ်မှုကိုအဓိကအသုံးပြုသည့်မြင်ကွင်းအရဆုံးဖြတ်သည်။ မည်သည့်နေရာတွင်သင်လိုအပ်သည်ဖြစ်စေအကောင်းဆုံးသောအကြံပြုချက်များနှင့်နမူနာများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။
ရုံးခန်းအတွက်စက်ရုံနှင့် Hot Sell နှစ်မျိုးစလုံးပါသော Roller မျက်မမြင်အထည်
Zebra blinds, dimming blinds, double-layer roller blinds, day and night blinds, rainbow blinds စသဖြင့်လူသိများသောသက်သက်သာ roller blinds သည်တောင်ကိုရီးယားတွင်စတင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာတွင်လည်းလူကြိုက်များသည်။ သက်သက် roller blinds ထည်၏ပစ္စည်းကို 100% polyester ဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းသည်အရိပ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရုံသာမကလူတို့၏တက်ကြွသောအချိန်တွင်အလင်းလိုအပ်ချက်ကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ၎င်းကိုအိမ်များ၊ ဟိုတယ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဗီလာများ၊ အဆင့်မြင့်ရုံးအဆောက်အအုံများနှင့်အခြားနေရာများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ roller blinds ထည်နမူနာလက်ကမ်းစာစောင်တွင်ပစ္စည်း ၂၀၀ ကျော်ရှိသည်။ သင်၏အကောင်းဆုံးအရောင်များကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။
အရည်အသွေးမြင့်မားသောနေ့နှင့်ညမျက်စိကန်းသောအထည် 100% Polyester
နေ့နှင့်ညကိုမျက်စိကန်းသောထည်များကို zebra blinds fabric, သက်သက် blinds ထည်၊ သက်တန့် blinds ထည်၊ dimming roller blinds ထည်နှင့် double-layer roller blinds ထည်သို့မဟုတ် dualer roller blinds ထည်အဖြစ်လူသိများသည်။
နေ့နှင့်ညမျက်စိကန်းသူများသည်အလွှာနှစ်ထပ်ရှိသည်။ ၎င်း၏မှိန်ခြင်းကိုထည်အလွှာနှင့်ကွက်လပ်များကြားဖြတ်ခြင်းဖြင့်ရရှိသည်။ ကွက်အလွှာများထပ်နေသည်နှင့်အမျှအလင်းပျော့ပြောင်းပြီးတိုက်ရိုက်အလင်းကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိလျှော့ချပေးသည်။ ထည်အလွှာများထပ်တူကျသောအခါအလင်းလုံးဝပိတ်သွားပြီးအလင်းကိုနောက်ဆုံးတွင်ပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ တစ်နေ့လုံးနှင့်ညလုံးမျက်မမြင်ထည်ကို ၁၀၀% polyester ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးကျွန်ုပ်တို့အထည်အားလုံးအတွက်လက်မှတ်ရှိသည်။
မြင့်မားသောအသုံးပြုမှုနှုန်း Zebra Shade အထည် 100% Polyester
Zebra Shade အထည်
Zebra Shade ထည်ကိုသက်တန့်မျက်စိကန်းသောထည်၊ သက်တန့်မျက်စိကန်းသောထည်၊ မှေးမှိန်သော roller blinds ထည်နှင့်နှစ်လွှာအလွှာ roller blinds ထည် (သို့) roller blinds ထည်ဟုလည်းလူသိများသည်။ ထည်၏ဝိသေသလက္ခဏာများအရ၎င်းကို Semi-blackout zebra fabric နှင့် blackout zebra fabric သို့ခွဲခြားနိုင်သည်။
၎င်းကိုအိမ်များ၊ ဟိုတယ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဗီလာများ၊ အဆင့်မြင့်ရုံးအဆောက်အအုံများနှင့်အခြားနေရာများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။aည့်ခန်းနှင့်စာသင်ခန်းကဲ့သို့သောပွင့်လင်းသောနေရာတွင်အရိပ်များသည်မမြင့်လွန်းပါကသင် Semi-blackout zebra blinds ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်မြင့်သောအရိပ်ကိုလိုအပ်သောအိပ်ခန်းသို့မဟုတ်အသံ - အမြင်အာရုံရှိသောအခန်းတစ်ခန်းဖြစ်ပါကသင်မှေးမှိန်သော zebra blinds ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
၎င်းသည်သုံးဖက်မြင်ခံစားမှုရှိပြီးအလွန်ပူနွေးသည်။ မျက်မမြင်များဖွင့်လိုက်သောအခါအပြင်ပန်းရှုခင်းကိုကြည့်။ အခန်းကိုထိုးဖောက်သောအလင်းသည်နူးညံ့။ သက်တောင့်သက်သာရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သက်တန့်မျက်စိကန်းသောထည်သည်သက်တန့်မျက်စိကန်းသောစက်ရုံများသို့မဟုတ်လက်ကားရောင်းသူများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်ယူသူများအတွက်သက်တန့်မျက်စိကွယ်သောအ ၀ တ်အစားများကိုအခမဲ့ပေးနိုင်ပါသည်။ သက်တန့်မျက်စိကန်းသောအ ၀ တ်အထည်များသည်မပို့မီအရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုကိုအောင်မြင်ရမည်။
Villas များအတွက်ရောင်စုံ Zebra အထည် 100% Polyester
Zebra ထည်ကိုလည်းသက်တန့်မျက်စိကန်းသောထည်၊ သက်တန့်မျက်စိကန်းသောထည်၊ မှိန်သော roller blinds ထည်နှင့်နှစ်လွှာအလွှာ roller blinds ထည်သို့မဟုတ် dual-roller blinds ထည်အဖြစ်လူသိများသည်။ ထည်၏ဝိသေသလက္ခဏာများအရ၎င်းကို Semi-blackout zebra fabric နှင့် blackout zebra fabric သို့ခွဲခြားနိုင်သည်။
a ည့်ခန်းနှင့်စာသင်ခန်းကဲ့သို့သောပွင့်လင်းသောနေရာတွင်အရိပ်များသည်မမြင့်လွန်းပါကသင် Semi-blackout zebra blinds ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အရိပ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရုံသာမကလူတို့၏တက်ကြွသောအချိန်တွင်အလင်းလိုအပ်ချက်ကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်မြင့်သောအရိပ်ကိုလိုအပ်သောအိပ်ခန်းသို့မဟုတ်အသံ - အမြင်အာရုံရှိသောအခန်းတစ်ခန်းဖြစ်ပါကသင်မှေးမှိန်သော zebra blinds ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ မည်သည့်နေရာကိုသင်ရွေးချယ်ပါစေအကောင်းဆုံးအကြံပြုချက်များနှင့်နမူနာများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။
New Style Rainbow မျက်မမြင်ထည် Semi-Blackout
Zebra blinds, dimming blinds, double-layer roller blinds, day and night blinds စသည်ဖြင့်လူသိများသော Rainbow blinds ကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှစတင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာတွင်လည်းလူကြိုက်များသည်။ ၎င်းသည်တူညီသောအကျယ်ရှိသည့်သေးငယ်သည့်အ ၀ တ်အထည်နှင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားကွဲလွဲနေသောကွက်လပ်တစ်ခုမှယက်လုပ်သည့်ထည်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သုံးဖက်မြင်ခံစားမှုရှိပြီးအလွန်ပူနွေးသည်။ သက်တန့် blinds ထည်၏ပစ္စည်း 100% polyester ဖြစ်ပါတယ်။
စျေးကွက်ရှိသက်တံရောင်ခြည်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကညှိနှိုင်း။ ရသောအလင်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောအလင်းအခြေအနေများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့် Groupeve Zebra Blinds Fabric ၏အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ရုပ်သွင်သည်ကောင်းမွန်သည်။
အရည်အသွေးအာမခံချက်ခံနိုင်ရည် Zebra အထည် 100% Polyester Semi-Blackout
Zebra blinds ထည်ကိုသက်သက်သာမျက်စိကန်းသောထည်၊ သက်တန့်မျက်စိကန်းထည်၊ မှေးမှိန်သော roller blinds ထည်နှင့်နှစ်လွှာအလွှာ roller blinds ထည်သို့မဟုတ် dualer roller blinds ထည်အဖြစ်လူသိများသည်။ ထည်၏ဝိသေသလက္ခဏာများအရ၎င်းကို Semi-blackout zebra fabric နှင့် blackout zebra fabric သို့ခွဲခြားနိုင်သည်။
၎င်းသည်အထည်နှင့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း၏အားသာချက်များကိုပေါင်းစပ်ရုံသာမကဘဲ venetian blinds, roller blinds နှင့်ရော blinds များ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်းပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းကိုအိမ်များ၊ ဟိုတယ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဗီလာများ၊ အဆင့်မြင့်ရုံးအဆောက်အအုံများနှင့်အခြားနေရာများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။